Xal La’aanta Galmudug ma Xilkas La’aan Baa mise waa Taariikh Xumo? – Radio Daljir
Xal La’aanta Galmudug ma Xilkas La’aan Baa mise waa Taariikh Xumo?
Oktoobar 1, 2017 8:59 g 1
Oday Cabdi Qaybdiid: “Galmudug sida ay ku timid nin waliba waa ogyahay. Waxaa la yiri haruub ninkii soo lisay la ogyahay, ninkii rabaa ha sido.”
Dhibaatooyinka siyaasadda iyo maamul dhidbiddu waa ammuuro joogto ah, mana aha kuwo u gaar ah Galmudug ee waa kuwa dunida oo dhan laga simanyahay, maamulada Soomaalida ee meel kastana ay soo wada mareen. Galmudug waa ay ka gudbin dhibka siyaasadeed ee maanta taagan, laakiin imtixaanka u yaal huggaanka iyo nindoorka Galmudug baa ah muujinta in ay shacab iyo deegaan maamuli karaan.
Sidaas darteed, muhiimadda qoraalkan ma aha in eedda dabadheeraatay ee Soomaali ka dhexaysa aan sii dheerayno, laakiin waa in aan Soomaali, siiba nindoorka, siyaasiyiinta, iyo shacabka reer Galmudug, xasuusino in ay isweydiiyaan su’aasha ah: “xal la’aanta Galmudug ma xilkas la’aan baa mise waa taariikh xumo?”
Sidoo kale, muhiimadda qoraalka qayb kama ah su’aasha “Galmudug sharci ma ku dhisantahay, mise buuxisay shuruudaha dowlad xubin ka ah dowladda Federaalka Soomaaliya?”
Mar kale, mar haddii sharci ahaanshaha Galmudug muhiimadda qoraalku uusan ahayn, isweydiin mayno in deegaanka “Galmudug” ay Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) u aqoonsatahay ay dadka deegaanku raalli ka wada yihiin iyo in kale.
Maamulka Galmudug oo biloowgiisii hore la aasaasay 11 Agoosto 2006, maanta waa kow iyo toban jirsaday. Saas oo ay tahay, hadana unkayaasha maamulka Galmudug waa kuwo weli ku abtirsada siyaasaddii iyo taariikhda Janaraal Caydiid. Waa maamul weli raba amaba aan ka warqabin in uu isku dhex wado abtirsiinyahaas iyo faafin maamul.
Galmudug kow iyo tobankaas sano deegaan ahaan waa kortay, laakiin siyaasad ahaan ma ay gaarin korriimo dhab ah. Maamulka, cuqaasha, culimada iyo ganacsatada Galmudug marnaba ma ay noqon kuwo ehel u ah dhab-ka-hadal dhammaan danaha deegaanka Galmudug, xaqa dariska, iyo hormarinta danaha bulshada deegaanka.
Taariikhdu waa mid qoran e, siyaasiyiinta, culimada, ganacsatada, iyo cuqaasha Galmudug kow iyo tobankii sano ee la soo dhaafay qorshayaashooda waxaa ugu muhiimsanaa hal qorshe oo ah “dhul ballaarsi” dhanka Puntland iyo dhanka Waqooyiga Galgaduud. Huggaamiye, siyaasi, iyo oday dhaqameed kasta oo Galmudug soo maray siyaasaddiisa marnaba kama aysan marneyn sheegasho dhul iyo deegaan maamul ama qolo kale. Nasiibdarro, marnaba siyaasaddaas kuma aysan jirin hormarin dhul Galmudug hoosyimaada ama uu maamulka Galmudug ka arrimiyo.
Waa hubaal in qof kasta oo hormar Soomaaliyeed hammigiisu yahay, amaba kan weli la yaabban hab-dhaqanka Soomaalida, keeda waxbartay iyo kan weli geela la jooga, in uu isweydiinayo su’aasha ah: haddii aadan maamuli karin, nabadeyn karin, oo aadan hormarin karin dhul dadkiisu raalli kaa yihiin, see ka yeelaysaa dhul dadkiisa iyo deegaankuba aysan raalli kaa ahayn?
Dad La’aan Mise Dhul La’aan?
Meel kasta oo maanta Soomaali isku haysato, xinjiruhuna weli waranyihiin, waxaa la isku hayaa “deegaanka reer hebel baa iska leh (maamul hebel) ee reer hebel ha isaga baxo iyo reer hebel ma leh.” Sidaas darteed, horta ma dhul la’aan baa jirta, mise dad la’aan? Maxaa hal hoggaamiye ama siyaasi Galmudug u diiday in uu dadkiisa iyo deegaankiisa ka run sheego? Tan kale, siyaasiyiinta Galmudug ma isku wadi karaan abtirsiinyaha siyaasaddii Caydiid ee dhulballaarsiga, hufnaan maamul, iyo hanashada qabaa’ilo kale? Jawaabtu waa maya, maxaa yeelay siyaasadda dhulballarsigu waa mid faashil ah oo aan qaadi karin hufnaan maamul iyo hanasho qabaa’il kale. Waa siyaasaddii fashilisay Jananka, waana mid fashili doonto hoggaamiye walba oo Galmudug oo isla siyaasaddii mar kale isku daya.
Saas oo ay tahay, garoowshaha iyo fahamka taariikhu waa hawl u taal nindoorka Galmudug. Haddii nindoorka Galmudug uu raalli ka noqdo siyaasadda gurracan ee siyaasiyiintiisa, suurtagal ma ah in Galmudug laga gaaro xal waara. Siyaasad qalad-u-joog ah marnaba ha ka filan in ay dhasho hormar, nabad, iyo hufnaan maamul. Xal la’aanta Galmudug ayana ha ka raadin meel ka fog siyaasadda qalad-u-joogga ah ee siyaasiyiinta Galmudug.
Hadaba haddii wax walba ay saas u cadyihiin oo caad maanta saaran uusan jirin, maxaa loo waayey hal qof oo reer Galmudug ah oo isla intaas si hufan ugu bidhaansha reer Galmudug intooda kale?
Cabdi Qaybdiid iyo Dhab-ka-hadal
Cabdi Qaybdiid oo hadda ah Oday Aqalka Sare, laakiin taariikhdiisa Soomaaliya ay tahay mid madoow (xataa reerka dhexdiisa), horayna aan looga baran siyaasad aan ka ahayn “weerar, dil, dulmi iyo dumi”, waanadiisa siyaasadeedna aan anfac hore looga baran, maantana in la aqbalaa ay tahay ammuur culus, baa hadda bilaabay in uu bidhaansho meesha hoggaanka reer Galmudug laga haysto.
Oday Cabdi Qaybdiid oo asbuucii la soo dhaafay Cadaado u yimid in uu dabdamiska siyaasadda cakiran ee Galmudug ka qaybqaato, laakiin illaaway in uu qabaa’ilada kale ee Galmudug garbo ka dhigto, talada wax ka siiyo, uuna xasuusto in Galmudug ay hadda hal reer ka badantahay, waana uu ku beryey kaddib filanwaagiisii hadalkii Madaxweyne Kuxigeen Maxamed Xaashi Cabdi (Carrabeey) ee ahaa, “adeer anaa hadda meesha Madaxweyne ka ah illaa mid kale la dooranayo” waxa uu helay fagaare uusan waxba la harin, aadna mooddo in uu xiriirka ugu jarayo taariikhdii fashilantay ee Galmudug.
Oday Qaybdiid oo raba in uu la jaanqaado waaga cusub ee siyaasadeed ee Galmudug, runtiina ah khabiir la jaanqaada siyaasadaha isrogrogga badan ee Soomaaliya, baa shirkiisii Madaxweyne Kuxigeen Carrabeey kabacdi waxa uu qabtay kulan bulsheed Galmudug, kaas oo ahaa mid aan siyaasi reerku waligiis horay u qaban, bulsho reer Galmudug ahna dhab-ka-hadal la hor imaan.
Annaga oo soo koobanayo, aan idin la qaybsano qodobadii ugu muhiimsanaa ee shirka jaraa’id ee Oday Qaybdiid, oo laba qodob ugu muhiimsanyihiin. Waxa uu ku bilaabayaa in Galmudug aysan maanta xammili karin dhibaato siyaasadeed, maxaa yeelay awal bay afar dhibaato sakaraad la ahayd, lana liicaysay. Afartaas dhibaato labada ugu muhiimsan oo aan hore cidina uga hadlin buu Oday Qaybdiid hadalka ku bilaabay:
Degmooyin badan oo reer Galmudug waxaa maanta haysta Shabaab oo 7-8 sano ka ilma dhalay, oo aan weli la is oran war yaa naga maqan
Galmudug qayb dhan oo kalaa maqan oo waxaa maqan qaybta Ahlu Sunna Wal Jamaaca ay maamusho
Qodobka koowaad oo Cabdi Qaybdiid uu si murugo leh uga dhawaajiyey (daawo muuqaalka hoose), ahna in degmooyin badan oo Galmudug ay Alshabaab ka ilmadhaleen, reer Galmudug weli waxba iskama ay oran, waa ismoogsiinayaan, ama waaba ka raalli; waa ka raalli hadda, waa ka raalli markii hore ee Qaybdiid uu madaxweyne Galmudug ahaa, wixii madaxweyne ka danbeeyey, culimo, caamo, iyo ganacsatana warkooda daa.
Nasiibdarrooyinku waa kala jaar e, xaafadda Wadajir ee degmada Gaalkacyo oo Cabdiqaybdiid mar deegaan u ahayd, marna lagu dili gaaray, maantana ah hoyga laga soo abaabulo weerarada, dilka, iyo qaraxyada lala beegsado Puntland, siiba Gaalkacyo, maanta cidna gacan uguma ay jirto, Puntland baysan gacan ugu jirin, Galmudug ayana warkeeda daa, cidina illaa iyo hadda isma ay weydiin. Markii ay ugu roontahay iyo haddii Puntland ka hadashana madaxda Galmudug waxa ay isla markiiba la soo boodaan waa “tuhun ku salaysan isir nacayb reer Galmudug.”
Maxaa wax la saxaa, maxaa la wada shaqeeyaa, haddiiba laga indhala’yahay waxa laga wada shaqaynayo ama mabda’a la rabo in la iska kaashado?
Nasiirdarro kalaa ayana ah in marka kaliya oo Alshabaabta Galmudug laga hadlaa ay tahay 3 jeer oo kaliya:
Markii Puntland laga fuliyo weerar aad loo soo qorsheeyey, shakina uusan ku jirin in weerarku uu yahay mid Alshabaab. Galmudug way inkirtaa in Alshabaab ay deegaanka Galmudug weerar ka soo qaaday ama uu jiro xiriir ka dhexeeya Galmudug iyo AlShabaab (xasuuso weeraradii cuslaa ee Garacad, Suuj iyo Garmaal ee bariga Puntland).
Mar kasta oo Alshabaab ay weerar ka fulinayso buuraha Bari iyo kuwa Calmadow, waxaa hadana saacado kahor ama kabacdi, maalin kahor ama maalin kabacdi, weerar kale oo qorshaysan laga fuliyaa aagga Gaalkacyo, badanaa Jeexdin, Godad, Ballibusle, iyo aagga bari ee Mudug. Sidoo kale, mar kasta Galmudug way inkirtaa in Alshabaab ay deegaanka Galmudug weerar ka soo qaaday ama uu jiro xiriir ka dhexeeya Galmudug iyo AlShabaab, ama Alshabaab ay ku sugantahay deegaanada Galmudug.
Dil kasta iyo ismiidaamin kasta oo qorshaysan waa mid laga soo abaabulo deegaanka reer Galmudug ama uu soo abaabulo qof isla deegaanka ahi, waana mid ay mar kasta inkiraan Galmudug iyo nindoorka Galmudug.
Reer Galmudug iyo siyaasiyiinta Galmudug waa ku xilkasnimo xumo, waa ku taariikh xumo in maalin kasta xaqiiqada deegaanka iyo siyaasadda qalafsan ee Soomaaliya ay iska indhatiraan. Haddii ay iska indhatiraana waa mid uun iyagana qaniini doonta; waa mid jiilalka soo koraya ee reer Galmudug asaagood ka reebi doonta. Meel fog ha ka raadin ee xasuuso Bariire maanta, Bariire shalay, Jeexdin maanta iyo jeexdin shalay, Xamar maanta iyo Xamar shalay. Ma wax aan khasaare adduunyo iyo mid aakhiro ahayn bay siyaasiyiinta iyo nindoorka reer Galmudug ka dhaxleen in ay maalin kasta iska indhatiraan xaqiiqada hadba maalinkaas taagan? Nindoorka Galmudug soo ma laha dub u naxa dadkiisa iyo deegaankiisa?
Mid kale ayaa ayana ah in qabiilada kale ee deegaanka ee raba in dalladda Galmudug wax lagu wada qaybsado, kheyr iyo shar, in dallada Galmudug lagu wada abtirsado, aysan ayana raalli ka noqon doonin in si joogto ah magaca Galmudug ay hal qolo say rabto u isticmaasho. Waa haddii la rabo in magaca Galmudug la wada lahaado, la wada daaqo, lagu wada negaado, haddii kale magacu hal qolo un buu u harin, waxa uuna ku noqon doonaa meeshii iyo reerkii uu markii hore ka soo askumay. Markaasna waaba suurtagal in reerka uusan u harin dad iyo deegaan ay calan Galmudug kula noqdaan.
Sababta Soomaali ay Fadaraal u qaadatay soo ma ahayn in inta wada daaqda ay wada tashato? Haah, oo waa ay jiraan nindoor badan oo Soomaaliyeed oo diidan nidaamka Fadaraalka, laakiin nindoorkaas waa mid aan aqoon talada dadka uu rabo in uu u taliyo; waa mid aan xasuusan waxa Soomaali soo kala maray; waa mid aan ka warqabin jahliga iyo aqoonxumida maanta dadkiisa haysta. Waa aqoonyahan buug uu akhriyey raba in uu dad aan buug akhrin uga taliyo. Nindoorka Soomaaliyeed, siiba qurbajoogta aqoon iyo khibrad ehelka u ahi, waa in ay fahmaan in haddii inta wada daaqda aysan wada tashan, in nin kale uusan u talin karin, meel kalena looga talin karin.
Sidoo kale reer Galmudug oo dhammaantood wada daaqa, haddii aysan runta isku sheegin, haddii aysan wada tashan, haddii aan huggaankeeda iyo nindoorkeedu uusan runta sheegin, ma sii wada daaqi karaan, magacna ma sii wada wadaagi doonaan.
Oday Cabdi Qaybdiid haddii uu shalay iyo dorraad Soomaali qaladaad ka galay, maanta waa ninka kaliya ee qaladaadkii dhacay shalaytayooda haya, illaa iyo hadda la hadlay dadkiisa, runta u sheegay, maantana ku dayasho mudan. Laakiin “far kaliya fool ma dhaqdo” e aawaye garbihii Oday Cabdi Qaybdiid? Aawaye haweenkii, aawaye nindoorkii la rabay in uusan maanta oo kaliya ka fakarin ee uu qorshe u sameeyo 30 ka sano ee soo socda iyo jiilalka dhalan doona?
Mise sida ay taariikhda dhow ee Soomaaliya na bartay, waa mar kale iyo “war maanta Qaydiid naga qabta” iyo taariikh xumo kale? Jawaabi maanta waxba kuma toorana, ee ha la arko, ha la maqlo, oo ha la dareemo ficilka nindoorka Galmudug, oo ha la badbaadiyo Galmudug.
Khudbaddii taariikhiga ahayd ee Oday Cabdi Qaybdiid hoos ka daalaco
Qormooyinka Daljir 54 Siyaasadda & Dhaqaalaha 501 Wararka 25996
Abdifatah Ali Osman 4 years ago